Dib udhaca hadalka caruurta | Bezzia
Maria Jose Roldan | 04/06/2021 23:14 | Wiilkaaga
Waxa ugu xun ee waalidku sameyn karaa waa inuu ilmahiisa barbar dhigo kuwa kale. Mawduuca hadalka waa mid ka mid ah kuwa hela isbarbardhiga ugu badan waana in waalidiin badani u dulqaadan waayaan ereyada ugu horeeya ee ilmaha.
Marka laga hadlayo luqadda, shakiga nooc kasta ayaa soo baxa, qaasatan kuwa laxiriira daqiiqada ay tahay in kan yari hadalka bilaabo iyo haddii ay jirto wax laga walwalo haddii uusan ku sameyn da'da da 'cayiman.
1 Cunug walba wuxuu ubaahanyahay waqtigiisa
2 Goorma ayey dhibaato ka imaan kartaa hadalka cunuga
3 Sida loogu kicin karo horumarka luqadda carruurta
Cunug walba wuxuu ubaahanyahay waqtigiisa
Waalidiinta waa in loo caddeeyaa in carruurta oo dhami isku mid ahayn iyo qof walba wuxuu ubaahanyahay waqtigiisa markay tahay barashada luuqada. Waa run in da 'gaar ah caruurta oo dhami waa inay hadlaan iyagoon wax dhibaato ah qabin hadii kale, kan yari wuxuu la kulmi karaa dib udhac horumarka hadalka.
Sida caadiga ah, ilmuhu waa inuu dhahaa ereyadiisa ugu horeeya markuu jiro hal sano. Marka la gaaro 18 bilood, kan yar waa inuu lahaadaa eraybixin ku saabsan 100 erey. Markaad gaarto da'da laba, eraybixinta si aad ah ayaa loo kobciyey oo ilmuhu waa inuu horey u haystaa in ka badan 500 oo eray markuu hadlayo. Tani waa wax iska caadi ah, in kasta oo ay jiri karaan carruur eraybixintoodu ay aad u yar tahay oo ay ereyo ka yari ku yaryihiin.
Goorma ayey dhibaato ka imaan kartaa hadalka cunuga
Waxay noqon kartaa inuu dib u dhac ku yimid luqadda, marka ilmuhu markuu gaadho laba sano aanu awood u lahayn inuu isku xidho laba eray. Waxaa jira astaamo kale oo kaaga digaya dhibaatooyinka luqadaha ee halista ah:
Ilmuhu markuu saddex jirsado wuxuu sameeyaa dhawaaqyo gooni ah laakiin ma awoodo inuu ereyada qaarkood sheego.
Lama xiriirin karo ereyada si loo sameeyo jumlado.
Ma laha awood ay ku dhawaaqdo iyo isagu waa karti uun ku dayasho.
Waa muhiim in waalidka loo muujiyo xaaladaha inta badan dib u dhacu wuxuu caadeystaa inuu caadi noqdo sanadihii la soo dhaafay.
Sida loogu kicin karo horumarka luqadda carruurta
Xirfadleyda goobta waxay kugula talinayaan in la raaco tilmaamo taxane ah oo u oggolaanaya carruurta in ay horumariyaan luqaddooda sida ugu habboon uguna habboon:
Way fiicantahay waalidiinta inay u akhriyaan caruurtooda sheekooyinka ama buugaagta si joogto ah.
Cod dheer ku dheh falalka kala duwan ee lagu fulinayo guriga.
Ku soo celi ereyada kuwaas oo loo isticmaalo maalin-ka-maalin.
Waxaa lagugula talinayaa inaad waqti uhesho ciyaaraha waxbarashada kaas oo luqad ama hadal uu leeyahay doorka koowaad.
Gaaban, mawduuca hadalka waa mid ka mid ah kuwa inta badan waalidiinta ka walwal badan. Markaad aragto sida carruurta kale ay u awoodaan inay ku dhahaan ereyadooda ugu da'da weyn iyo in ilmahaagu uusan dhihi karin, waxay waalidiinta badan ka dhigeysaa kuwo cabsi badan. Xusuusnow in cunug walba uu u baahan yahay waqtigiisa, marka waa inaad ka fogaataa isbarbardhiga. Waxaa jira caruur badan oo dib u dhac ku yimaada hadalka, laakiin sanadihii la soo dhaafay, afkoodu wuxuu noqdaa mid caadi ah waxayna maamulaan inay hadlaan iyaga oo aan wax dhibaato ah qabin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Hooyooyinka » Wiilkaaga » Dib udhaca hadalka caruurta
5 fure si loo badbaadiyo qaboojiyaha xagaagan